မြန်မာ တပြည်လုံးကို အဆိပ်ခတ်နေ တဲ့ အာဂျီနိုမိုတို အချိုမှုန့် ထုတ်လုပ်မှု (ကိုယ်ချစ် ရသူတွေ သိအောင် မျှဝေပေး ကြပါအုံး) – Let Pan Daily
သူမ ရဲ့ လ�...
မြန်မာ တပြည်လုံးကို အဆိပ်ခတ်နေ တဲ့ အာဂျီနိုမိုတို အချိုမှုန့် ထုတ်လုပ်မှု (ကိုယ်ချစ် ရသူတွေ သိအောင် မျှဝေပေး ကြပါအုံး)
Let Pan | June 5, 2020 | Knowledge | No Comments
FDAကို ပုံနဲ့တကွ တည်နေရာအတည်အကျ သတင်းသွားပေးတာ အဲ့ဒါ သူနဲ့မဆိုင်သလို တစ်မြို့လုံးလိုက်စစ်နေဖို့ အချိန်မရှိပါဘူးတဲ့ …. အဲ့တော့ အမျှသာဝေကြပေါ့ ….
အားလုံးသိအောင် မျှဝေပေး ပါအုံးဗျာ သတိထားကြဖို့..😥
အချိုမှုန့် ဆိုတာ ဘာလဲ ဘာတွေနဲ့ လုပ်ထား တာလဲ ဘယ်လောက် ထိ အန္တရာယ် ပေးနိုင်လဲ
ချစ်မိတ်ဆွေ သင့်အိမ်ထဲမှာ သင်နှင့်အတူ သင့်မိသားစုကိုပါ အသံတိတ် သတ်ဖြတ်သွား နိုင်တဲ့ လူသတ်သမားကို သင်ကိုယ်တိုင် အိမ်ထဲ သို့ဖိတ် ခေါ်ထားမိ သလားဆိုတာ မိတ် ဆွေကိုယ်တိုင် စီစစ်သင့်ပါပြီ။ ရေရှည် မှန်မှန်စားသွားရင် ဒီလောက် အန္တရာယ်များပါတယ်ဆိုတဲ့ အချိုမှုန့်ဆိုတာ Monosodium glutamate(MSG) လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Glutamic Acid လို့ခေါ်တဲ့ Amino Acid တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး စားစရာထဲထည့်လိုက်ရင် Free Glumate တွေအဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားကာ အစားအသောက်တွေရဲ့အရသာကို ဓာတုနည်းနဲ့ လျှာပေါ်မှာ ဆပွားတိုးပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချိုမှုန့်ဟာ ဟင်းခတ်ပစ္စည်း တစ်ခု ဟုတ်ပါသလား?
ပုံမှန်သုံးသင့်တဲ့ ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်တစ်ခု လုံးဝမဟုတ်ပါ။ နည်းနည်းစားစား များများစားစား ရေရှည်စားရင် အန္တရာယ်ကတော့ ရှိတာပါပဲလို့ ပညာရှင်များက ပြောကြားပါတယ်။ Good Manufacturing Practice (GMP) လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ထုတ်လုပ်မှု စနစ်ကောင်း (GMP စနစ်) ရဲ့ အစားအသောက်တွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အချိုမှုန့် လုံးဝ မပါပါဘူး။
အချိုမှုန့်ကို ရေရှည်ပုံမှန် စားသုံးသွားရင် ဘာဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်မလဲ။
(၁) ဆီးချို မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေး တဲ့ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း (Insulin) ရဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာမှာ အနှောင့်အယှက် တစ်ရပ် ဖြစ်စေလို့ ဆီးချိုဖြစ်စေဖို့ ကောင်းကောင်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။
(၂) အစာ အလွန်အကျွံစားချင်စိတ်ကို တိုးပွားဖြစ်ပေါ်စေသလို အဝလွန်ခြင်းကို တားဆီးပေးတဲ့ ဟော်မုန်းများကိုပါ ပိတ်ဆို့လို့ အဝလွန်ခြင်းကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်း ရောက်လာရင် သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံးသွေးကြောပိတ် စတဲ့အဖော်အပေါင်းတွေပါ ပါလာပါလိမ့်မယ်။
(၃) ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို မြန်မြန် ပျက်စီးယိုယွင်း စေပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်ကို အရွယ်မတိုင်ခင် ပျောက်ဆုံးစေပြီး မေ့တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်စေဖို့ အလားအလာ အရမ်း များစေပါတယ်။ အချိုမှုန့်ကို မွေးကင်းစ ကတည်းကနေ စပြီး စားတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဉာဏ်ရည်ပိုင်း ယုတ်လျော့မှု ရှိတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
(၄) ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ အချိုမှုန့် သုံးစွဲမှုကို လုံးဝဖြတ်တောက် ရှောင်ကြဉ်ဖို့ အမျိုးသားအဆင့် ကြေငြာချက်တွေ ဥပဒေတွေ အလန့်တကြား ထုတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ဂျာမန်ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေ ဘာတွေ့ရ လို့လဲ ဆိုတာ စာဖတ်သူတို့ သိပါသလား။ အချိုမှုန့် စားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ မွေးလာတဲ့ကလေးတွေဟာ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း စွမ်းရည်ကျဆင်း၍ မတိုးတော့ခြင်း (Insulin-resistant) မွေးရာပါ ဖြစ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီကလေးတွေ ဟာ ကြီးလာရင် ဆီးချိုဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ ဆီးချိုဖြစ်ပွားနှုန်း မြင့်မားနေတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေ အချိုမှုန့်စားတဲ့ အကျင့်ကြောင့် မွေးလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့ medulla oblongata, thalamus, or hypothalamus ဆိုတဲ့ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ရှိတဲ့ အာရုံကြောဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
ဒီနေရာတွေဟာ အစားအသောက် စားချင် စိတ်ကို အဓိက ထိန်းချုပ်တဲ့ ဦးနှောက် ဧရိယာတွေ ဖြစ်လို့ ဒီလို ကလေးတွေဟာ ကြီးလာရင် အစားအသောက် အလွန်အကျွံ စားတဲ့ အကျင့်ရှိကာအဝလွန်ပြီး ရောဂါတွေ ထူစေတတ်တာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လေ့လာတွေ့ရှိ ထားပါတယ်။
ဒါဟာ အချို့မှုန့်ကပေး တဲ့ အမျိုးသား ကျန်းမာရေး/ လူမှုရေး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး (National Health/Social Burden) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချိုမှုန့် ဝယ်ယူတင်သွင်းရတဲ့အတွက် နိုင်ငံနဲ့လူမျိုး အကျိုးရှိစေမယ့် တခြားအရာတွေဝယ်ယူဖို့ နိုင်ငံခြားငွေ လျော့စေလို့ တိုင်းပြည်အတွက်လဲ နစ်နာ ပါတယ်။
(၆) မျိုးပွားစွမ်းရည် ကျဆင်းခြင်း၊ သားသမီး ရနိုင်စွမ်း ကျဆင်းခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Chinese Restaurant Syndrome ခေါ် တရုတ်စားတော်ဆက်ရောဂါစု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီရောဂါစုဟာ အချိုမှုန့် လွန်ကဲစွာပါတဲ့ အစား အသောက် စားပြီးပြီးချင်းမှာ မျက်နှာ၊ လည်ပင်း နဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ အနီစက်တွေ ထွက်လာခြင်း၊ ခေါင်းအရမ်းထိုးကိုက်ခြင်း၊ခေါင်းမူးခြင်း၊ မျက်နှာမှာ တင်းကြပ်နေတယ်လို့ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ မေးလှုပ် ပါးစပ်ဖွင့်ရတ လေးခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း စတာတွေ ခံစား ရတတ်တဲ့ အချိုမှုန့်နဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) ပန်ကရိယခေါ် မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ရောဂါ အပါအဝင် ကိုယ်တွင်းကလီစာ တစ်ခုခု ရောင်ယမ်းတဲ့ ရောဂါ ရှိနေသူတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ စာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အထူးရှောင်ကြဉ် သင့်ပါတယ်။’
(၈) လူအများစုက ဆားကအငန် အချိုမှုန့်က အပေါ့ ဆိုပြီး တလွဲမှတ်ယူထားကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဆားထည့်လွန်လို့ ငန်သွားရင် အချိုမှုန့်များများ ထပ်ထည့် ပါတယ်။ အမှန်က ဆားက Sodium chloride ၊ အချိုမှုန့်က Monosodium glutamate ဖြစ်လို့ နှစ်ခုလုံး ဆိုဒီယမ် (Sodium) ဆားဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခု ပြိုင်စား သုံးရင် သွေးတွင်းဆိုဒီယမ် မြင့်တက်မှု အရမ်းများလာစေကာ သွေးတိုးရောဂါကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးရောဂါ ကာကွယ်လိုသူများနဲ့ ရှိသူများဟာ အချိုမှုန့်ကို အထူးရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
အချိုမှုန့် စွဲလမ်းနေခြင်းကို ဘယ်လို လျှော့ချ အမြစ်ဖြတ်ကြမလဲ
(၁) လျှော့ချသုံးခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ အချိုမှုန့်ဟာ အသားတွေ ရဲ့ အရသာ ကိုသာ မြှင့်တင်ပေးတာ ဖြစ်လို့ အသီးအနှံတွေမှာ လုံးဝမသုံးပါနဲ့။
(၂) ယေဘုယျလမ်းညွှန် (General Guideline) အရ ပြောရရင် အစား အသောက် တစ်ကီလို (၂.၂ပေါင်) ကို အချိုမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့ တစ်ဇွန်းထက် ပိုမသုံးပါနဲ့။ ဒါဆိုရင်တော့ အန္တရာယ် နည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၃) ရယ်ဒီမိတ် အစားအသောက်တွေ အားလုံးနီးပါးမှာ အချိုမှုန့် ပါပြီးသား ဆိုတာ သတိထားပါ။ ဘယ်တော့မှ အချိုမှုန့် ထပ်မထည့်ပါနဲ့။
(၄) ရယ်ဒီမိတ်စားစရာတွေ ဝယ်ရင် လေဘယ်လ် ပေါ်မှာပါတဲ့ အချိုမှုန့် ပါဝင်မှုပမာဏကို ရှာဖွေပါ။ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ အစားအသောက် တံဆိပ်တွေ အားလုံးရဲ့ ပါဝင်ဖက်ပစ္စည်းစာရင်း (Ingredient List) ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ အချိုမှုန့်တကယ်သုံးထားရင် သုံးထားကြောင်း ပမာဏ အတိအကျ ပါ ပါတယ်။
(၅) ရိုးရာ ဟင်းခတ်အမွှေး အကြိုင်တွေ (ဥပမာ ပုစွန်ခြောက်၊ ငါးပိ စတာတွေ) ကို ပြန်လည်အစားထိုး သုံးသင့်ပါပြီ။ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ ရှေးအစဉ်အဆက် ဘိုးဘွားများဟာ ထွားကျိုင်းသန်မာ ရောဂါကင်းခဲ့တာ အချိုမှုန့် မစားခဲ့ကြတာလည်း ပါပါတယ်ခင်ဗျား။
(၁၄.၆.၂၀၂၀) မှ (၂၀.၆၂၀၂၀) ထိ (၇)ရက် သားသမီးများ အတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
ငှသေုံးသိနျး ရှိတယျ…ဘာရငျးနှီး ရငျ ကောငျးမလဲ? (အရမျးကောငျး တဲ့ Idea လေးပါ)
ဆရာ မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း)၏၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ (၁၆)ရက် မှ(၂၃)အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ယတြာ ပြုရန်ဟောစာတမ်း
အမျိုးသမီးငယ်လေးတိုင်း သိစေရန် (တစ်မိနစ်လေး အချိန်ပေးပြီး သင်ဖတ် လိုက်လျှင် သင့်အတွက် အကျိူး ရှိမှာပါ)
အခါခါ ပွနျကွညျ့ ခငျြ ရလောကျအောငျ မိ မိုကျပွီး ဆှဲဆောငျ မှု ရှိလှနျး တဲ့ ရှငျယှနျးမွတျ
သူမ ရဲ့ လနျးလှနျးတဲ့ ကောကျကွောငျး အလှကို ထုတျပွ လိုကျ တဲ့ ဖူးပှငျ့သခငျ
အိပျယာထကျမှာ ကွိုးတဈလုံး ညအိပျ ဝတျစုံလေး နဲ့ ကြော့ရှငျး လှပနပွေီး ဆှဲဆောငျမှု ပိုလှနျးနတေဲ့ ဆိုငျးလု
တငျလေး ကော့ပေးပွီး ကျောဖီ သောကျပါဦးလား လို့ဖိတျချေါ လိုကျတဲ့ မကျြဝနျး
ဆကျဆီ ကကြ အရမျးလနျး လှနျး တဲ့ ခြိုဇငျဝငျးပွညျ့ ရဲ့ ဗီဒီယို
ကွညျ့မိ သူတိုငျး ရငျခုနျကွှဆေငျး သှားစမေယျ့ သီရိရှငျးသနျ့ ရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျမြား